सोलाबाङ बजार क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? (जनमत) - AahaSanchar
Home आहा बिचार सोलाबाङ बजार क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? (जनमत)
रुकुम (पश्चिम) मुसिकोट नगरपालिका ४ सोलाबाङ्ग बजारको व्यवस्थापनको विषयमा के कस्ता सवालहरु उठिरहेका छन त ? प्रस्तुत छ,संवाददाता फलिराम विश्वकर्माले त्यहाँका विभिन्न व्यक्तिसँग भेटेर तयार पारिएको आहा जनमत ।
नगरले गाडिको व्यवस्था गरेको छैन ?
भेषराज महतारा : सरसफाई आफै गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले गाडिको व्यवस्थान पनि गरेको छैन । आफ्नो वरपरको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्छौ । जल्ने फोहोर जलाउछौ तर नजल्ने फोहोर भने व्यवस्थापन गर्न अलि गाह्रो हुने गर्छ । यदि नगरले गाडिको व्यवस्थापन गरिदिएको भए त्यसको समस्या अलि कम हुने थियो जस्तो लाग्छ । अहिले नकुहिने फोहोरलाई घर वरपर नै थन्काएर राख्नबाध्य छौ ।
फितलो बजार अनुगमन
झक बहादुर ददेल : बजार व्यवस्थापनको कुरा गर्दा चाहिँ जे होस् ठिकै छ । बजारको सरसफाई प्रत्येक हप्ताको शनिबार बजार व्यवस्थापन अध्यक्षकै सक्रियताम हुने गर्छ । त्यसका लागी अध्यक्ष आफै खटिईरहेका हुन्छन । तर बजार अनुगमनमा भने त्यति चासो नदिए जस्तो लाग्छ ।
नगरको सौतेनी व्यवहारबाट पीडित छ सोलाबाङ बजार
विष्णु के.सी : सोलाबाङ्ग बजार व्यवस्थापनको लागी जति खलङ्गा बजारमा ध्यान छ त्यति सोलाबाङ बजारमा पुगेजस्तो देखिदैन । नगरपालिकाले पनि सोलाबाङ्ग बजारलाई सौतेनी व्यवहार गरेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो नगरपालीकाको फोहोर उठाउने गाडि खलङ्गा, बागबजार र सेरिगाउँको लागीमात्रै खरिद गरेको जस्तो छ, सोलाबाङमा उपलब्ध छैन । जसले गर्दा हामिलाई नकुहिने र नजल्ने फोहोरहरु व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गर्दछ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा गर्दा चाहिँ प्रहरी चौकी सोलाबाङ र बजार व्यवस्थापन समितीको रोहोबरमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार साप्ताहिक रुपमा हुने गर्दछ । तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन पनि कहिले काहिँमात्रै हुने गर्छ । हामीले यस बजार क्षेत्रमा ‘क’वर्गको बैंकको माग गरेका थियौ त्यो पनिअझै भएको छैन । ४/५ वर्षदेखि एडिएसएल फोनको माग गरेकोमा बल्ल भर्खरै मात्र हाम्रो सपना पुरा भएको छ । त्यसमापनि वडा कार्यालयले ५०० सय रुपैयाँ कर उठाउदा म निकै असन्तुष्ट छु ।
सार्वजनिक धारा र शौचालयको आवश्यकता
मानबहादुर के.सि : बजार व्यवस्थापनको पक्ष त ठिकै छ । खासै बिग्रेको के नै छ र । सरसफाईको विषयलाई लिने हो भने प्रत्येक हप्ता प्रहरी चौकी.र बजार व्यवस्थापन समितीको रोहोबरमा सरसफाई भएकै छ । तर यत्रो बजार छ एउटा सार्वजनिक शौचालय छैन त्यसमा भने असन्तुष्टि छु नै भन्नुपर्छ । सार्वजनिक धाराको पनि आवश्यकता छ । यसको व्यवस्थान पनि हुन सके राम्रो हुन्थ्यो कि ?
गाडिका यात्रुले बजारमा वान्ता फ्याक्छन
मन्जित बि.क : सरसफाईको केहि महत्व छैन । फोहोर मैला जथा भावी फालिएको हुन्छ । गाडिबाट आउने यात्रुले समेत प्लाष्टिकमा गरेको वान्ता बजारमा ल्याएर फाल्ने गरेको पाईन्छ । प्रत्येक हप्ताको शनिबार प्रहरीले सरसफाई गर्न लागाएपनि कसैले गर्छन कसैले गर्दैनन् । बजार अनुगमनको विषयमा भने कहिले काहिँ मिती पुगेको सामान नष्ट गरियो भन्ने सुनिन्छ । सुुरक्षामा पनि कुनै घटना भएको आसपासमामात्र सबै उर्लिन्छन । अनि केहि समयपछि भने सबै बिर्सिएर पहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्छन ।
मेरो नजरमा सबै ठिकै छ ।
पहल वली : यहाँको सरसफाईको अवस्था अनि समग्रमा सबै ठिकै छ । आफ्नो पसल अगाडि त सधै हुने नै भईहाल्यो तर हप्ताको एक दिन अनिवार्य रुपमा सड्क लगायत बजार क्षेत्र सफा गर्ने काम गरिन्छ । अन्य कुरा खासै टिप्पनी गर्न लायक देख्दैन मैले ।
Previous post जोन कार्यक्रम पछि कृषकहरु उत्साहित
Next post आहा सञ्चार साप्ताहिक रुकुम बर्ष ६, अंक २२, मंसिर १९ २०७५